Isilinganiso Sokuzimela Kwezezimali | Ezezimali Zomnotho
Ukuzimela kwezezimali yikhono lenkampani noma lomuntu lokunganciki emalini yomuntu ukuze anelise izinhloso zakhe. Izilinganiso zezomnotho zisisiza njengethuluzi elikhulu lokubala imali ukuhlaziya izimo zezomnotho ezingaba "yinkimbinkimbi" zisuka. Ngakho-ke ngokubheka okukodwa singabona ukuthi kulula kangakanani noma kuvumelana nokuthi yini ebalwayo. Kuleli cala nendatshana, sizochaza konke mayelana nesilinganiso sokuzimela kwezezimali.
Ngemuva kokufunda le ndatshana, uzoba nombono ophelele mayelana nokuthi isilinganiso sokuzimela kwezezimali siyini, ukuthi ungayibala kanjani kanye nemiphumela ekuyo enkampanini. Ngenxa yalesi silinganiso, izinqumo ezingathathwa zingaba namandla ngokwengeziwe lapho isilinganiso siphezulu. Ngokuphambene nalokho, kubhekwa izinqumo ezimbalwa ezingenziwa uma izinga lokuzimela kwezezimali liphansi. Iphinde isebenze njengethuluzi lokuthi izinkampani zingabala kanjani ukuthi izinsizakusebenza zazo zilunge kangakanani ezikweletini. Ukukuqonda ngokugcwele, qhubeka ufunda kuze kube sekupheleni.
1 Yini isilinganiso sokuzimela kwezezimali?
2 Ifomula yokubala isilinganiso sokuzimela kwezezimali
3 Ungasichaza kanjani isilinganiso?
3.1 Ukwanda kwesikweletu kusithinta kanjani isilinganiso?
Yini isilinganiso sokuzimela kwezezimali?
Isilinganiso sokuzimela kwezezimali izama ukuchaza ukuncika inkampani enakho kubakweletisi bayo, okungukuthi, okweleta imali, isikweletu. Lokhu kubalwa kudlula ekunqumeni ukulingana inkampani enakho maqondana nesikweletu sayo. Ngokulandelana, isilinganiso sisinikeza ubudlelwano namandla abo okuboleka. Ukuphakama kwalesi silinganiso, kukhula kakhulu amandla enkampani okuphila esikhathini esizayo, ikakhulukazi kucatshangelwa ukuthi izimo zokungaqiniseki zingavela kwesinye isikhathi. Isibonelo esihle kungaba yindawo yamanje esihamba kuyo lapho ubhadane lufaka khona lezi zilinganiso esivivinyweni. Izinkampani ezinesilinganiso esihle sokuzimela kungenzeka zingathinteki kakhulu kunalezo isilinganiso sazo ebesingathandeki kakhulu ngaphambi kwezinkinga ezingenzeka.
Abanye abantu basebenzisa amagama "Ukulingana" ukusho "Ukulingana", akunandaba. Okubalulekile ukuthi noma sisebenzisa igama elilodwa noma amanye amagama sivele sisho into efanayo. Kulokhu, ukuze wazi izimali zakho, kuyadingeka ukuthi ususe ingqikithi yezimpahla kwingqikithi yezikweletu (isikweletu).
Ifomula yokubala isilinganiso sokuzimela kwezezimali
Njengoba sike saphawula phambilini, kungubudlelwano phakathi kokulingana nezikweletu. Ifomula ibalwa Ukulingana kwesahlukaniso kusuka kuzikweletu eziphelele (isikweletu) esifushane nesikhathi eside. Inombolo evelayo isilinganiso sokuzimela kwezezimali. Ukuze sikuqonde kangcono, sizokwethula isibonelo ngezinkampani ezimbili esicabanga ukuthi zivela emkhakheni owodwa. Isibonelo, izinkampani ezinikezelwe ukuthuthwa kwabantu.
Esimweni sokuqala, sithola inkampani enemali yayo iyonke ingama-euro ayizi-1.540.000. Isikweletu saso sonke sifinyelela kuma-euro ayizinkulungwane ezimbili. Lokhu kusho ukuthi sihlukanisa imali yabo ngesikweletu sabo, okungukuthi, izikweletu zabo, sithola u-2.000.000. Lokhu kungaba isilinganiso sokuzimela kwezezimali.
Ngecala lesibili, sinenkampani encane ngosayizi futhi inokulingana kwama-euro angama-930.000. Ngemuva kwalokho sinesikweletu sakhe esiphelele sifinyelela kuma-euro ayizi-240.000. Ngemuva kokuhlukanisa imali ngesikweletu sayo, sithola ukuthi inesilinganiso sokuzimela kwezezimali esingu-3,87.
Ngaleli cala nesibonelo, ngike ngazama ukubeka icala "elidumile", lelo lesibonelo sesibili. Ngakolunye uhlangothi, sizobona ukuthi isilinganiso senkampani yesibili siphezulu kangakanani, se-3. Kuzinzile ngokwezezimali, ngalokho akukho kungabaza. Kodwa-ke, nakanjani ingakhula kakhulu, kepha konke lokho okusemandleni kuzoba khona ngendlela efihliwe, bekungeke kusizakale ngakho.
Ungasichaza kanjani isilinganiso?
Ngokuvamile, inkampani kuthiwa inokuzimela okuhle kwezezimali lapho okungaphezu kwengxenye yezinsizakusebenza zayo kuvela ezimalini zayo. Kepha ukuthola umbono, inani eliphansi lalesi silinganiso okulindeleke ukuthi inkampani ibe naso kufanele libe ngu-0 noma ngaphezulu. Isilinganiso esiphakathi kuka-0 no-7 "ngokujwayelekile" yiyona ejwayelekile kakhulu futhi ibaluleke kakhulu.
Ngakolunye uhlangothi, inkampani ibizoba nezimali nezinsizakusebenza ukubhekana nezikhathi ezinzima. Lezi zikhathi zingahle zingabi yinkimbinkimbi kakhulu, kepha ukwehlisa ukuqapha nokuzethemba ngokweqile akuholeli emiphumeleni emihle. Ngakolunye uhlangothi, besingeke sikhulume ngesikweletu esikhulu kakhulu, okusho ukuthi inamandla okuzimela ngokwezezimali futhi uma kunesidingo noma imali ayizobeka ukusinda kwayo engcupheni. Ngalesi sizathu, ukuba noma ukuzama ukugcina isilinganiso esiphakeme kubaluleke kakhulu, ngoba kubonisa uphawu lwamandla nokuzinza.
Njengedatha, kufanele ingezwe ukuthi asikho isilinganiso sokuzimela sezezimali somhlaba wonke esisebenza kuzo zonke izinkampani. Umkhakha ngamunye wehlukile, futhi ngeke kuncike emkhakheni osebenza kuwo kuphela, kodwa futhi nasemncintiswaneni nasezinhlosweni zebhizinisi zamanje zomzuzu ngamunye.
Ukwanda kwesikweletu kusithinta kanjani isilinganiso?
Uma sibheka izibonelo zezinkampani ezimbili ezichazwe ngenhla, singabona ukuthi inkampani yesibili ingaboleka kangakanani. Ake sikubone ngombono. Uma ama-euro ayisigidi esingu-1 ebengacelwa ukutshalwa kwezimali kanye / noma ukuthengwa kwempahla, inani lenkampani belizokhuphuka lisuke kuma-euro alo ayi-1.170.000 (izimpahla zalo ngaphambi kokwehlisa isikweletu ukuze lazi inani lilonke) liye kuma-euro angu-2.170.000.
Isikweletu sizokwenyuka siye ku-1.240.000 euros (i- € 240.000 kanye ne- € 1.000.000 eyengeziwe). Inani lakhe lilonke lizohlala ku- € 930.000. Lokhu kusho ukuthi isilinganiso sakho sokuzimela kwezezimali sizoba ngu- € 930.000 esihlukaniswe ngo- € 1.240.000 sizoba ngu-0. Kucishe kufane, njengoba kwenzeka enkampanini yokuqala.
Ngokusobala lokhu kubalwa kulula ngezinombolo eziyindilinga, futhi empeleni amakhomishini nezintela ezitholwe ezikweletini nasekutholakaleni kwezimpahla kuzofanele kwehliswe kuzimpahla zizonke. Kepha uma kukhulunywa ngokuthuthukisa ukusebenza kwezomnotho, siyabona ukuthi manje inkampani yesibili icishe yaphindeka kabili ngosayizi. Ngakho-ke, inzuzo yakho izobe iphakeme futhi ukuhamba kwemali okusebenzayo kuzokwanda, kukuvumela ukuthi ukhule kakhulu kunakuqala. Ngasikhathi sinye, isazoba nezinsizakusebenza zayo ukubhekana nesikhathi esithile esinzima, kepha isilinganiso sokuzimela sikhombisa lokho Ukuboleka okuningi kungaba yingozi futhi bekungeke kunconywe.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ibhizinisi » izinkampani » Isilinganiso Sokuzimela Kwezezimali
Kungani i-Euribor inegethivu?